China 5V Vest Black orinasa sy mpanamboatra | Eigday
5V Vest Mainty
Nosaronanay ny Mpamonjy tamin'ny fanadihadihana palitao mafana, ary ny orinasa dia manohy mihoatra ny andrasana amin'ny akanjony mafana. Ny endrik'izy ireo dia namboarina mba hamolavola ny vatana, ary ny fitaovan'ny nylon dia mahatonga azy io ho akanjo faran'izay tsara.
Ireo singa fanamafisana ny fibre carbon dia apetraka stratejika hanome hafanana manerana ny vatanao ambony. Misy telo amin'izy ireo amin'ny totaliny: ny iray eo afovoany aoriana ary ny roa ao ambanin'ny paosy.
Misy bokotra fiasa mora ampiasaina izay ahafahanao misafidy eo amin'ny sehatra hafanana telo. Amin'izay ianao dia afaka mahita sy mihazona mari-pana anatiny tsara indrindra mandritra ny fivezivezena ety ivelany.
Mpamonjy bateria 5-volt an'ny Mpamonjy dia mamela ny fampiasana hatramin'ny 11 ora amin'ny fiampangana feno. Raha mitady hitsangatsangana tontolo andro any an'efitra ianao dia azonao atao ny mahatsapa ny hafanan'ny herinaratra mandritra ny fotoana iray manontolo.
Ambonin'ny zava-drehetra, maivana ilay akanjo ary mahatohitra ny rano sy ny rivotra. Raha ny marina, sarotra ny mahita antony tokana mba tsy hisafidianana ny akanjo mafana navoakan'ny Mpamonjy. Io dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra eo amin'ny tsena.
Nandritra ny traikefa an-taonany maro tao amin'ny indostrian'ny akanjo mafana dia nametraka akanjo mendrika mendrika ny Mpamonjy. Na dia ny akanjo faran'izay tsara namboarinay tao anatin'ity lisitra ity aza dia nahatonga ny fifaninanana ho henjana tokoa, ny akanjon'ny Mpamonjy dia iray amin'ireo mpitarika ny indostria ihany.
Ny setrin'ny hafanana eto dia tsio-drivotra ahitsy. Ny zava-drehetra dia fehezin'ny fampiasana bokotra tokana. Izany dia manamora ny fahitana ny toerana misy ny hafanana mety aminao nefa tsy mila mijanona izay ataonao.
Ny fanamorana fanampiny dia ny vatan'ny zipper Mpamonjy miaraka amin'ny akanjo, izay mahatonga azy io ho safidy mety amin'ny karazan-karazan-vatana. Ny zipper dia ahafahanao manamboatra ny akanjo ho an'ny filanao tianao, manomboka amin'ny antonony ka hatramin'ny XXL.
Miaraka amin'ny endriny avo tendany, dia ho kanto ianao rehefa mankafy ny hafanan'ny herinaratra manafana ny vatanao amin'ny alalanao. Aza mirehareha be loatra momba izany, satria mety hampahasaro-piaro ny namanao ianao.
Tsy ny paiso sy crème daholo anefa. Ny akanjon'ny Mpamonjy dia ilay tratra havia, tratra ankavanana ary ny lamosina, faritra miisa 3.
Teo aloha: Manga fotsy 5V
Manaraka: Vehivavy akanjo ba mafana SHV06P